Bukayo Saka Oo Ugu Dambayn Ka Baxay Aamusnaanta & Waxa Uu Ka Yidhi Cunsuriyadda, Aflagaaddada & Rikoodhii Uu Khasaariyey - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaBukayo Saka Oo Ugu Dambayn Ka Baxay Aamusnaanta & Waxa Uu Ka Yidhi Cunsuriyadda, Aflagaaddada & Rikoodhii Uu Khasaariyey
Bukayo Saka Oo Ugu Dambayn Ka Baxay Aamusnaanta & Waxa Uu Ka Yidhi Cunsuriyadda, Aflagaaddada & Rikoodhii Uu Khasaariyey
Xiddiga da’da yar ee Bukayo Saka ayaa ka hadlay rikoodhihii uu ka khasaariyey xulka England, cunsuriyaddii lagula kacay iyo saamaynta ay shaqsiyan ku yeelatay.
19 jirkan oo khasaariyey rikoodhihii ugu dambeeyey xulka England kulankii finalka Euro 2020 ayaa waxa uu la kulmay cunsuriyad ihyo aflagaaddooyin badan oo baraha bulshada loogu gudbiyey, taas oo ay la wadaagayeen Marcus Rashford iyo Jadon Sancho oo iyaguna khasaariyey rikoodhaha.
Taageereyaasha Ingiriiska ayaa Bukayo Saka ku tilmaamay ciyaartoy ajaanib ah oo dalka yimid, waxaanay ka codsadeen inuu ku laabto Nigeria, hase yeeshee intan oo kaliya looguma ekaynin ee qaar kale ayaa aflagaaddooyin midabkiisa la xidhiidha usii raaciyey.
Booliska Ingiriiska ayaa xaqiijiyey inay soo xidheen shan qof oo ay la xidhiidhinayaan inay cunsuriyaddaas qayb ka ahaayeen.
Si kastaba, Saka ayaa ugu dambayn soo saaray qoraal uu ku daabacay bartiisa bulshada, waxaanu ku sheegay, inuu iskaga fogaaday baraha bulshada isla markaana uu qoyskiisa waqti la qaadanayo, isagoo dhinaca kalena sheegay in aanay wax saamayn ah ku yeelan doonin takoorka iyo cunsuriyadda lagula kacay.
“Waan iskaga fogaaday baraha bulshada maalmo kooban si aan waqti ula qaato qoyskayga, ugana falceliyo usbuucyadii u dambeeyey. Farriintani uma qalanto dhamaan jacaylkii aad ii muujiseen, waxaanan dareemayaa in la iiga baahan yahay in aan u mahad-celiyo qof kasta oo i taageeray.” Ayuu hadalkiisa ku bilaabay Saka.
Isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa uu Bukayo Saka intaas raaciyey: “Sharaf ayay ii ahayd inaan qayb ka noqdo xulka England. waa walaalaha nolosha, waxaanan u mahad-celinayaa qof kasta oo aan wax kasoo bartay sida ciyaartoyda iyo shaqaalaha oo si adag u shaqeeyey.”
Intaas kaddib ayuu ka hadlay murugadii uu ka qaaday rikoodhihii uu lumiyey, waxaanu yidhi: “Anigu ciyaarta kaddib aad ayaan u dhaawacmay, waxa aan dareemay in aan dhamaantiin hoos idiin dhigay, laakiin waxa aan idiin ballan-qaadayaa in aanay saamayn igu yeelan doonin waqtigaas ama waxyaabihii aan fiicnayn ee aan helay toddobaadkan aan fasaxa ku jiray.”
Waxa kale oo uu ka dalbaday baraha bulshada ee Instagram, Twitter iyo Facebook, in aanay ogolaanin in ay carruurta ama dadka waaweyn helaan farriimaha nacaybka iyo dhaawaca ah ee soo gaadhay isaga, Marcus Rashford iyo Jadon Sancho.